Read DL%20bureau%20Xhosa-low.pdf text version
Ungasifaka njani isikhalazo malunga nengxelo yakho yamatyala okanye ulwazi?
SINAMANYATHELO AMATHATHU okusombulula isikhalazo ngempumelelo. Landela la manyathelo kwaye izikhalazo zakho ziza kusatyelwa:
&gt; Inyathelo lesiBini
Ungasifaka njani isikhalazo malunga nerekhodi yakho yamatyala okanye ulwazi?
* Iinkcazelo eziBalulekileyo
Ulwazi lwamatyala olubi lomsebenzisi luquka: · Ulwazi oluquka ukuhlela ukuziphatha komsebenzisi njengomoni, ongahlawuli ityala lakhe, ohlawula kade, obalekayo, okanye ongaqhagamshelekiyo. · Amahlelo anxulumene nentshukumo yokunyanzelisa afana: nokunikezela koonothimba, ukuthatha kwakhona, inyathelo lomthetho, okanye ukuthatha njengelahleko. I-akhawunti eLeleyo · Le yiakhawunti apho kungekho ntlawulo ifunyenweyo evela kumsebenzisi okanye apho kungekho ntshukumo yesinyanzeliso eyenziweyo ngumnikeli wetyala. · Oku kubekela bucala amalungiselelo etyala kwakunye nawaphi na amatyala apho kungekho mfuneko yesivumelwano sokuba kwenziwe iintlawulo zenyanga nenyanga.
Qhagamshelana noCredit Information Ombud (uNozikhalazo ngoLwazi ngamaTyala)
UNozikhalazo ngoLwazi ngamaTyala anganceda kwaye ayalele iziko lamatyala ukujongana nesikhalazo sakho. Credit Information Ombud IzikoloMnxeba:0861OMBUDS(0861662837) Ifeksi:0866886976 I-imeyile:[email protected]
&gt; Inyathelo lokuQala
TransUnion           Experian S.A.
Qhagamshelana neZiko lamaTyala:
Qhagamshelana nelo ziko lamatyala elikhuphe ingxelo yakho yamatyala.
&gt; Inyathelo lesiThathu
I-NCR iza kuphanda umba ze iqinisekise ukuba uyasombululwa. National Credit Regulator (NCR) IzikoloMnxeba:0860627627(0860NCRNCR) I-imeyile:[email protected] www.ncr.org.za
IzikoloMnxeba:0861105665 Xpert Decisions Systems (XDS)   IzikoloMnxeba:0116459100 Micro Lenders Credit Bureau (Microlending)   IzikoloMnxeba:0861287328 Compuscan (Microlending)   IzikoloMnxeba:0861514131 Consumer Profile Bureau   KreditInform IzikoloMnxeba:0112783800
IzikoloMnxeba:0117772700 LexisNexis Risk Management   IzikoloMnxeba:0215659700
Ukuba isikhalazo sakho asisombululwanga, qhubeka ukuya kwiNyathelo lesiBini!
Abasebenzisi banelungelo lokufumana simahlaingxelo ibenyeyeziko lamatyalakanye ngonyaka.
Iinkcazelo ezibalulekileyo malunga nolwazi oluthile lwetyala lomsebenzisi
Cleaning up your Credit Bureau Record
Imvelaphi: I-National Credit Act (UmThetho weSizwe wamaTyala)
Loluphi ulwazi olungasuswa kwiirekhodi zamatyala?
Kufuneka iindidi ezilandelayo zolwazi zisuswe kwiirekhodi zamaziko amatyala kungadlulanga umhla woku-1 kuJuni 2007. 1. 2. Ulwazi olubi lwamatyala omsebenzisi ngokuphathelele kwityala elingaphantsi kwama- R500*; Ulwazi lwamatyala omsebenzisi ngokuphathelele kwiiakhawunti, ezithe zalala ithuba leenyanga ezingama- 24 okungenani ngomhla woku-1 kuSeptemba 2006*; Izigwebo zenkundla yoluntu: a) eziya kutsho kuma- R500 (ngaphandle xa umsebenzisi enezigwebo ezingekahlawulwa ezingaphezulu kwezibini); b) eziya kutsho kuma- R5000 ukuba isigwebo singaphezulu kweenyanga ezili- 18 ubudala (ngaphandle xa umsebenzisi engenazo izigwebo ezingaphezulu kwezibini ezingekahlawulwa kwiirekhodi zakhe); Izigwebo eziya kutsho kuma- R50,000 ukuba imali yesigwebo ibihlawulwe ngomhla woku- 1 kuSeptemba 2006; Ngokuphathelele kwizigwebo ukuya kutsho kuma- R50,000 ebezingahlawulwanga ngomhla woku- 1 kuSeptemba 2006, umsebenzisi unethuba ukuya kutsho kumhla woku- 1 kuSeptemba 2007 ukuhlawula imali yesigwebo nokuthumela ubungqina bentlawulo kwiziko lamatyala.
Amaziko amaTyala afumana ulwazi kubanikeli bamatyala. Agcina irekhodi yembali yakho yamatyala kwaye kufuneka akuncede ukulungisa ulwazi olungachanekanga. Ukuba iziko lamatyala alisusi ulwazi oluchaziweyo, kufuneka abasebenzisi bafake isikhalazo kwiziko lamatyala. Ukuba ulwazi alukasuswa emva kokuba umsebenzisi efake isikhalazo kumaziko amatyala, umsebenzisi angaqhagamshelana neNCR okanye uCredit Information Ombud (uNozikhalazo ngoLwazi ngamaTyala).
UmThetho ulawula amaziko amatyala nolwazi ngamatyala. Abasebenzisi banelungelo lokufumana simahla ingxelo yeziko lamatyala kanye ngonyaka. Ukuba kukho naluphi na ulwazi olungachanekanga kwingxelo, abasebenzisi bangacela umngeni kwiziko lamatyala ukususa ulwazi oluphosakeleyo okanye ukululungisa. Kufuneka iziko lamatyala lingabhengezi ulwazi olubangwayo de kube ulwazi luqinisekisiwe.
A. Imimiselo yeCandelo 73
ICandelo 73 lomThetho libonelela ngokususwa kube kanye kolwazi oluthile kumaziko amatyala. Injongo yemimiselo kukujongana neenkxalabo ezivakaliswe luluntu ngokubanzi malunga neenkcukacha ezingachanekanga nefuthe elibi kwinkululeko yezoqoqoso yabasebenzisi elibangwe &quot;kukufakwa kuluhlu lwabahlawula kakubi&quot;. Ngomhla woku-1 kuDisemba 2006, imimiselo ipapashiwe yaze yachaza ukususwa: 1. Kolwazi kwizikweleti ezileleyo; 2. Kweerekhodi ezimbi; 3. Kwezigwebo zenkundla yoluntu. Ezinye iinkcukacha zolwazi ezinokususwa zidweliswe kwicandelo B lale ncwadana. Iinkcazelo zolwazi olubi lwamatyala abasebenzisi neeakhawunti ezilelelyo zidweliswe ekupheleni kwencwadana.
C. Ungaqinisekisa njani ukuba ulwazi
olugcinwe ngamaziko amatyala luchanekile?
Kude kube ngumhla woku-1 kuSeptemba 2007, ungafumana ingxelo yetyala yasimahla kuphela ngenyanga yakho yokuzalwa. Emva koko, omnye nomnye umsebenzisi unelungelo lokufumana ingxelo yasimahla enye kanye ngonyaka nanini na enyakeni. Ezinye iingxelo zetyala zingafunyanwa kwiziko lamatyala ngentlawuliso engadlulanga kuma- R20.
D. Kungani na kubalulekile ukuhlola
irekhodi yakho yamatyala?
Kubalulekile ukufumana ingxelo yakho yamatyala ukuze ukwazi ukuqinisekisa ukuba ulwazi olugcinwe liziko lamatyala luchanekile. Xa ulwazi lungachanekanga ungacela umngeni kwiziko lamatyala ukuba lulungiswe. Unakho kananjalo ukuhlaziya iinkcukacha zakho zobuqu ukuba mhlawumbi zitshintshile.
Xaulwaziolugcinwengamaziko amatyalaluphosakele, ungacelaumngenikwiziko lamatyalaukubalulungiswe
Qaphela ukuba olu lwazi kufuneka kube belubonakalisiwe kwiirekhodi zakho ngokomhla woku- 1 kuSeptemba 2006 ukuze lungene nakweyiphi na yeendidi ezixeliweyo ngentla khonukuze amaziko amatyala alususe ngomhla woku- 1 kuJuni 2007. * jonga kwiinkcazelo ekupheleni kwencwadana
Uqinisekisa njani ukuba ulwazi olugciniweyo ngawe luchanekile?
Ngomhlawoku-1kuJuni2006,umThethoobizwa i-NationalCreditAct,waqalisaukusebenzakwaze kwasekwai-NationalCreditRegulator(uLawulo lweSizwelwaMatyala).I-NCRinoxanduvalokulawula imalikeyamatyalanokunyanzelisaumThetho.
B. Loluphi ulwazi lwamatyala olungasuswa
kwiirekhodi zakho zamatyala ngamaziko amatyala?
Lakuba iziko lamatyala lisuse ulwazi oludweliswe ngentla, kufuneka lazise onke amaziko amatyala abhalisiweyo, ekufuneka nawo ngokunjalo asuse naluphi na ulwazi olufana nolo kwiirekhodi zawo.